प्रचण्डलाई मिलौं भनेकै हुँ, स्वार्थ मिलेपछि एमालेतिर जानुभयोः बाबुराम | Daily State News
६ जेष्ठ २०७५, आईतवार १०:०७ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डले पार्टी चलाउन नसकेर एमालेमा विलय गराए । यो एकताप्रति त्यती खुसी नदेखिएका उनले सत्ता र स्वार्थ मिलेर एकता भएको भन्दै धेरै नटिक्ने दाबीसमेत गरे ।
हिजो एमाले र माओवादीले एकता प्रक्रियामा मिसिएको तर, बीचमा छाडेर हिँडेका भट्टराई किन यति आक्रामक छन् ? शनिबार पोखरामा भेटिएका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः
म रुपान्तरण चाहन्थें । मार्क्सवादी विचार र आन्दोलन, जसलाई कम्युनिष्ट आन्दोलन भनियो, १९१७ भन्दा अगाडि श्रमिक आन्दोलन, सामाजिक जनवादी आन्दोलन भन्ने चलन थियो । कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्दै जाँदा त्यो भ्रस्टिकृत हुँदै जान्छ, त्यसको सारतत्वलाई ग्रहण गर्दै नयाँ प्रयोग गरिन्छ । एक सय वर्षसम्म कम्युनिष्ट भन्ने शब्द पनि भ्रस्टिकृत भयो । त्यसैले मार्क्सवादी आन्दोलनलाई २१ औं शताब्दीमा अगाडि बढाउन नयाँ पदावली खोज्नुपर्छ र नयाँ उन्नत प्रकारको समाजवादी, लोकतन्त्रमा आधारित रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो । त्यसैले मैले नयाँ शक्तिमार्फत त्यो मार्क्सवादी आन्दोलनलाई २१औं शताब्दी अनुरुप रुपान्तरण गर्न खोजेको हुँ ।
तर, असोज १७ मा त तपाई पनि एकता प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको थियो त ? फेरि प्रचण्डसँग मिल्ने भनेर वार्ता पनि गर्नु भएको थियो ।
मार्क्सवादलाई पछिल्लो ज्ञान र प्रविधिसँगै विकास गरौं, सारतत्व र रुप पक्षलाई पनि विकास गरौं भन्ने मेरो जोड थियो । दुई सन्दर्भमा यो कुरालाई म प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।
पहिलो, १७ असोजमा तीन पक्षका बीचमा एकता गर्ने कुरा आयो । एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति मिल्ने कुरा भयो । त्यतिबेला पनि मैले मार्क्सवादलाई सिर्जनशील ढंगले प्रयोग गरेर नयाँ समाजवादी धारको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मैले राखेको थिएँ तर, समय कम थियो ।
प्रचण्डले मुखले ‘जाने त त्यतै हो’ भन्नुभयो तर, व्यवहारमा जान चाहनुभएन र हामी छोड्न बाध्य भयौं । केपी ओलीले पनि कम्युनिष्ट शब्द छोड्दा मलाई पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्न सक्छ तर, जाने त त्यतै हो भन्नुभएको थियो ।
मैले माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गरौं भन्ने पहल गरेकै हो । त्यही क्रममा पहिले प्रचण्डसँग भेटेँ, पछि उपेन्द्र यादवसँग भेटेँ, हामी तिनै जना पनि भेट्यौं । तर, प्रचण्डमा पूरै द्विविधा थियो
चैत महिनातिर आइपुग्दा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्ने कुरा ढलमलाइ राखेको थियो । त्यो बेला मैले फेरि एकचोटी प्रचण्डसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गरेँ । तपाईंहरु अनावश्यक ढंगले सत्ता, स्वार्थमा केन्दि्रत भएर मूल चिजलाई छोड्दै जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले नोक्सान गर्छ, समय अझै बाँकी छ, तपाईले मार्क्सवादको प्रयोगलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ र नयाँ समाजवादी धार बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी मिलौं भनेको थिएँ । मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन पनि भनेँ ।
मैले माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गरौं भन्ने पहल गरेकै हो । त्यही क्रममा पहिले प्रचण्डसँग भेटेँ, पछि उपेन्द्र यादवसँग भेटेँ, हामी तिनै जना पनि भेट्यौं । तर, प्रचण्डमा पूरै द्विविधा थियो । सत्ता र स्वार्थको भागबन्डा आफूले भनेअनुसार प्राप्त हुँदा उतै जाने र त्यो प्राप्त नहुँदा यतापट्ट िआउन उद्दत भएको म पाउँथेँ । त्यो बीचमा २/३ हप्ता उहाँ ढुलमुलमै रहनुभयो ।
अन्ततः एमालेले विश्वस्त गराए कि पार्टीभित्र उहाँको स्थान सुरक्षित रहन्छ । त्यसपछि फेरि उहाँ कम्युनिष्ट खोल ओढेर उतै जानुभयो । यथार्थ यही हो ।
उसो भए तपाईंको नजरमा प्रचण्ड को हुन् ?
अनि केपी शर्मा ओलीलाई यहाँले हेर्ने नजर नि ?
एमाले र माओवादी मिलेर ठूलो बन्यो, अब अरु विचार, शैली मिल्ने पार्टी पनि एक हुन सजिलो होला । नयाँ शक्तिका बारेमा केही सोच्दै हुनुहुन्छ ?
सानो र ठूलो पार्टी भन्ने शब्द नै हामी प्रयोग गर्दैनौं । हामी त ठीक र बेठिक के हो हरौं भन्छौं । सत्य र असत्य, वैज्ञानिक र अवैज्ञानिक के छ भन्ने हेर्नुपर्छ । तत्काल आकारमा ठूलो भएको शक्ति सधैं ठूलो भइराख्दैन । कुनै बेला कांग्रेस धेरै ठूलो थियो, पछिल्लो समय एमाले ठूलो शक्ति बन्यो । २०६४/०६५ मा माओवादी ठूलो थियो । त्यसैले कुनै कालखण्डमा ठूलो हुनु महत्वपूर्ण कुरा होइन ।
सही हुनु वैज्ञानिक हुनु ठूलो कुरा हो । यो शक्ति आकारमा ठूलो भए पनि नेपाली समाजका अन्तर्विरोध हल गर्न सक्दैनन् र अन्ततः देशले विकल्पको खोजी गर्छ । एउटा पार्टीको विकासको मात्रै खोज होइन, विकसित विचार, नीतिमा आधारित वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो ध्येय हो । त्यसको औचित्व र आवश्यकता बढेर आएको छ ।
तर, नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा हुँदा जुन उत्साह थियो, जुन व्यक्तिहरु थिए, उनीहरु हराउँदै-हराउँदै गए । अहिले प्रालिजस्तो भयो भन्ने छन् नि ?
कुनै पनि नयाँ चिज हेर्न बडो समय लाग्छ । वैज्ञानिक विचार र दर्शन स्थापित हुन सयौं वर्ष लाग्छ । मार्क्सवाद सूत्रपात गर्दा उनको मलामी जाने व्यक्ति एघार जना मात्रै थिए भने आज मार्क्सका अनुयायी एक अर्ब छन् ।
त्यसैले नयाँ विचार तुरुन्तै स्थापित भइहाल्छ भनेर सोच्नु वैज्ञानिक हुँदैन । वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्तिको पहिचान जनताले छिट्टै देख्छन् । हो, यही नाम गरेका धेरै शक्ति हुँदा जनतालाई भ्रम पर्न सक्छ । त्यसैले विचार र नीति तथा कार्यक्रम मिल्ने शक्ति एक ठाउँमा आउनु नै वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा सहज हुन्छ भन्ने म ठान्छु ।
अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता जुन सत्ता र स्वार्थमा आधारित छ, उहाँहरु अब कसरी अगाडि जानुहुन्छ, त्यो अगामी दिनमा पर्खेर हेनुपर्छ । अहिले हामी शुभकामना दिनबाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।- साभार:अनलाइन खबर बाट